Adobe Spark wuxuu ku dhawaaqay 60-maalmood oo bilaash ah qashin-qubka | Abuurista khadka tooska ah
Adobe Spark waa bilaash muddo 60 maalmood ah illaa iyo Juun 15
Manuel Ramirez | | Naqshadeynta Webka, shabakadaha bulshada, dhowr
Maalmahan xadhiga Adobe Spark ayaa ku dhawaaqay in laga bilaabo maanta illaa iyo 15-ka Juun Sannadkan, dhammaan macaamiisha doonaya waxay ka heli karaan bilaash Spark shaqsi ahaan shaqadiisa. Warar dhawaaq ah oo loogu talagalay abuurista waxyaabo tayo sare leh qaab muuqaal ah oo loogu talagalay shabakadaha bulshada, bogagga internetka iyo fiidiyowyada gaagaaban.
Dallacsiintan ma aha oo kaliya ansax u ah isticmaaleyaasha cusub, laakiin kuwa haysta rukunka firfircoon ee adeegga markay ku daraan kuwaas 60 maalmood ah oo ay helaan biil dib loo dhigay ee tiradaas maalmood.
Waxaan ula jeedaa, waa maxay laga soo xigtay, waad awoodi doontaa iska qor laba bilood Adobe Spark, qalab aad u qaas ah oo lagu abuuro sawiradaas sidaa awgeed maanta looga baahan yahay shabakadahaas bulshada ama bogagga shabakadda. Sababtoo ah takhasus weyn ee shabakadahaan bulshada, sida Instagram iyo Sheekooyinkeeda, sawirrada waqtiga ama fiidiyowga, qalab sida Spark ah ayaa kuu oggolaanaya inaad sameysid waxyaabahaas la baaray.
Iyadoo shaqsi Spark ah aan haysanno marin u helka sheybaarada cayiman iyo kuwa gaarka ah, maktabadda Adobe font oo dhameystiran, aaladaha iskaashiga, taageerada noocyo badan, iyo waxyaabo kaloo badan. Way cadahay in dhiirrigelintan ay si dhow ula xiriirto xilliga la xayiray ee aan ku noolnahay adduunka oo dhan oo in badan oo ka mid ah guryahooda ay ka heli karaan maanta laga bilaabo qalab fiican oo lagu abuuro sawirada ugu fiican.
Xaqiiqdii, Adobe ayaa aad ugu habboon waqtiyadaas buugaag midabaynta ama taas xirmada shalay oo ay la socdaan Adobe Photoshop oo loogu talagalay iPad-ka iyo Adobe Fresco. Xaqiiqdii, Adobe for Spark ayaa tan la wadaagay ku dheji talooyin iyo tusaalooyin waayo gacan ka geysashada hal-abuurka ganacsiga yaryar kuwaas oo ah kuwa ugu badan ee maalmahan ku xanuunsanaya coronavirus.
Waqti aad u fiican iskuday Adobe Spark bilaash ah 2 bilood oo markaa aad ku cibra qaadatid khibrada goobta.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Naqshadeynta Webka » Adobe Spark waa bilaash muddo 60 maalmood ah illaa iyo Juun 15
Salaan! Waad ogtahay inaan kaqeyb qaatay "xayeysiintan" laakiin waxaan hada ogaaday in ay iga qaadayaan lacagaha billaha ah ... Tani ma khiyaano baa? Waxaan u baahanahay macluumaad (oo waan ogahay sida loo sameeyo dalab), haddii aad i siin kartid, waan ku qanacsanahay
Gali koontadaada oo u dir emayl si aad u aragto waxa dhacay. Meelaha kale, markii dacwad lagugu soo oogay, waad sheegan kartaa oo waxaad dhihi kartaa wuu kaa gudbay.
Hada waxaad kala soo bixi kartaa joornaalka Asterix bilaash iyo waxa viruska siiya mid fiican oo leh Obélix
Gene Dietich ayaa naga tagay, kartooni yaqaankii "Tom iyo Jerry" iyo "Popeye"